China electric angle sentsimbi mveliso kunye nabenzi | Qiangli
Umbane wenqaba yentsimbi
I-engile yombane inqaba yentsimbi Inqaba yentsimbi yombane luhlobo lwesakhiwo sentsimbi esinokugcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaqhubi abaxhasayo kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Kwiminyaka yakutshanje, ngokukhula okukhawulezayo koqoqosho lwesizwe, ishishini lamandla likhule ngokukhawuleza, eliye lakhuthaza ukukhula ngokukhawuleza komzi mveliso wokuhambisa inqaba. Ngokwezibalo, ingeniso yentengiso yeshishini lokuhambisa inqaba eTshayina inyuke ukusuka kwi-5 bil ...
Inqaba yombane yenqaba yentsimbi luhlobo lwesakhiwo sensimbi esinokugcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaxhasi abaxhasayo kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa.
Kwiminyaka yakutshanje, ngokukhula okukhawulezayo koqoqosho lwesizwe, ishishini lamandla likhule ngokukhawuleza, eliye lakhuthaza ukukhula ngokukhawuleza komzi mveliso wokuhambisa inqaba. Ngokwezibalo, ingeniso yentengiso yeshishini lokuhambisa inqaba eTshayina inyuke ukusuka kwi-5 yezigidigidi ze-yuan ngo-2003 ukuya kwi-42.6 yezigidigidi ze-yuan ngo-2010, nge-CAGR engama-36.68%, kwaye eli shishini likwixesha lokukhula ngokukhawuleza. Ngo-2010, kushishino umgca eTshayina unikezelo nqaba abe intsingiselo elungileyo yophuhliso, kwaye amashishini kolu shishino ulawulo oluphezulu kunye nokukwazi ukulawula iindleko kunye neendleko, kwaye inzuzo eyomeleleyo.
Ukuphela kuka-2010, ama-252 okusasaza umgca wentsimbi Amashishini ngaphezulu kwesikali e-China afikelele kwi-yuan engama-32.250 ezigidi zezigidi, ukonyuka kwama-25.55% ngonyaka. Ngo-2010, ixabiso lemveliso lilonke lemveliso yentsimbi yenqaba yase China yayiyi-43.310 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-25.36% ngonyaka-ngonyaka; Ingeniso yentengiso yayiyi-42.291 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-29.06% ngonyaka-ngonyaka; Inzuzo iyonke ifikelele kwi-yuan eyi-2.045 yezigidigidi, ukonyuka kwe-43.09% ngonyaka-ngonyaka.
Ngexesha le-12 leminyaka yesiCwangciso seMinyaka emihlanu, i-China iyakwandisa utyalo-mali kwigridi yamandla, notyalo-mali olumalunga ne-2.55 yezigidigidi ze-yuan, ebala i-48% yotyalo-mali lulonke kumandla, elimalunga ne-3.0% ephezulu kunaleyo ye-11th yesihlanu Cwangcisa ixesha. Ngotyalomali olwandayo kwigridi yamandla, ibango lokuhambisa umgca wenqaba liya kukonyusa rhoqo, kunye nethemba lokuphuhliswa kweshishini lokuhambisa umgca wenqaba libanzi. Izinga lokukhula lokudityaniswa kwentengiso yengeniso yomzi mveliso wenqaba eTshayina ngama-28% ukusukela ngo-2011 ukuya ku-2012, kwaye kulindeleke ukuba ingeniso yentengiso yeshishini lokuhambisa umgca wenqanawa eTshayina izakufikelela kwi-RMB 70.3 yezigidigidi.
Egqithileyo Umbane wenqaba yentsimbi
Okulandelayo: Umbane wenqaba yentsimbi
I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba
Umbane weNsimbi yeNqaba yombane
Umbane we-Angle Steel Towers
I-angle yombane yentsimbi ye-Angle tower yentsimbi yikholamu yeplate ene-downcomer. Indawo yokubhabha yenziwe ngentsimbi ye-engile ngokuhambelana kunye, kwaye ulungelelwaniso lwendlela yentsimbi ye-engile iyahambelana nolwalathiso lokuhamba kolwelo. Umphetho obukhali wentsimbi ye-engile ikwindawo esezantsi, kwaye icandelo lomnqamlezo likwimo ye "V". Kukho umsantsa othile phakathi kwee-steels ezimbini ezikufutshane. I-downcomer iyafana netreyi eqhelekileyo. Ulwelo i ...
Umbane wenqaba yentsimbi Nophuhliso lwamaxesha, iinqaba zamandla zinokuhlelwa ngokwezixhobo zokwakha, iintlobo zesakhiwo kunye nemisebenzi yokusetyenziswa. Ngokutsho kweemveliso ezahlukeneyo, ukusetyenziswa kwazo kwahlukile. Makhe sicacise ngokuhlelwa kwabo kunye nokusetyenziswa okuphambili: 1. Ngokwezixhobo zokwakha, inokwahlulahlulwa kubume beplanga, ubume bentsimbi, ialuminium ingxubevange yesakhiwo kunye nenqaba yesamente eyomeleleyo. Ngenxa yayo ...
I-engile yombane inqaba yentsimbi Inqaba yentsimbi yombane luhlobo lwesakhiwo sentsimbi esinokugcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaqhubi abaxhasayo kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Ngeminyaka yoo-1980, amazwe amaninzi ehlabathini aqala ukusebenzisa iiprofayili zombhobho wentsimbi kulwakhiwo lwenqaba xa kuphuhliswa imigca yokuhambisa ye-UHV. Iinqaba zetyhubhu zensimbi ezinemibhobho yentsimbi njengoko eyona nto iphambili yavela. EJapan, iinqaba zetyhubhu zentsimbi ziphantse zasetyenziswa kwi-1000kV U ...
I-engile yombane inqaba yentsimbi Inqaba yentsimbi yombane luhlobo lwesakhiwo sentsimbi esinokugcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaqhubi abaxhasayo kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Ngokukhula okuqhubekayo kwemfuno yamandla e-China, kwangaxeshanye, ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zomhlaba kunye nokuphuculwa kweemfuno zokhuselo lokusingqongileyo, iingxaki zokhetho lwendlela kunye nokudilizwa kwezakhiwo ecaleni komgca ziya ...
I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba, Ulwakhiwo Tube Steel, Umbane we-Angle Steel Towers, Umbane weNsimbi yeNqaba yombane, Ulwakhiwo lweZakhiwo zentsimbi, Inqaba kaMasipala yoNxibelelwano,